हवाई उडान खोल्न सरकारले थाल्यो यस्तो तयारी, बन्द हुँदा ठूलो आर्थिक नोक्सानी भो’ग्नु परेको खुलाशा ! – Sanchar Patrika
हवाई उडान खोल्न सरकारले थाल्यो यस्तो तयारी, बन्द हुँदा ठूलो आर्थिक नोक्सानी भो’ग्नु परेको खुलाशा !
July 14, 2020 306
काठमाण्डौं – नेपालमा लकडाउन सुरु भएपछि प्र’भावित भएको अर्को ब्यवसाय हवाई उडान पनि हो । नेपालमा को’रोनाको दोस्रो सं’क्रमित फेला परेपछि सरकारले चैत ११ गते लकडाउन घोषणा गरेको हो । त्यस यता आन्तरिक र वाह्य हवाई उडान ब’न्द भएका छन् । वाह्य हवाई उडान चार्टर मात्र भएका छन् । विदेशमा अ’लपत्र परेका नेपालीलाई ल्याउन र नेपालमा रहेका विदेशी जान तथा स्वास्थ्य सामग्री ल्याउन मात्र हवाई उडान भएका छन् । अन्यथा सबै हवाई उडान बन्द हुँदा ठूलो आर्थिक नोक्सानी भो’ग्नु परेको छ ।
लामो समय लाग्दै आएको प्र’तिवन्ध ह’टाउँदै अब हवाई उडान सुचारु गराउने विषयमा मन्त्रालयले तयारी थालेको छ । संस्कृति, पर्यटन तथा नागरिक उड्डयन मन्त्री योगेश भट्टराईले पहिले आन्तरिक उडान खोल्ने गरी सरकारले तयारी थालेको जानकारी दिएका छन् । अन्तराष्ट्रिय उडानका लागि भने अगस्तको दोस्रो साता सम्म पर्खनु पर्ने छ ।
हवाई उडान बन्द भएपछि त्यसमा आश्रित कर्मचारीलाई कम्पनीहरुले वि’दामा बस्न आग्रह गरेका थिए । जसका कारण हजारौं कर्मचारी प्रभावित भएका छन् । आर्थिक सं’कट झेलेको हवाई सेवालाई सुचारु गर्ने विषयमा छिटै निर्णय हुने भट्टराईले बताएका छन् । तर साउन ६ गते नै भने प्र’तिबन्ध खुलाउन नसक्ने उनले स्पष्ट पारेका छन् ।
मन्त्री भट्टराईका अनुसार साउन ६ गतेसम्मका लागि लगाइएको उडान प्र’तिबन्ध केही समय थप भएर उडान खोल्ने देखिएको छ । यद्यपि, उडान खोल्ने वा प्र’तिबन्ध लगाउने भन्ने विषयको टुङ्गो मन्त्रिपरिषदले लगाउनेछ । सम्भवतः विहीबार सार्वजनिक हुने मन्त्रिपरिषद्को निर्णयमा यस विषयको पनि सम्बोधन हुनेछ ।
Prevअयोध्याबारे अनुसन्धानकर्ता पौडेल भन्छन् -सक्कली अयोध्या नेपालमै,ओलीको दाबी सत्य
Nextप्रम ओलीवि’रुद्ध बीजेपी नेताको चेतावनी: नेपाल भारत सम्बन्धमा फाटो ल्याउन खोज्नेलाई इतिहासको टोकरीमा फ्याँक्नेछौं